Guddoomiye Cabdikariin Xinif Oo Xisbigii KULMIYE Ku Tilmaamay Mid Qof Gaar Ahi Leeyahay Kuna Baaqay In Loo Daayo Astaantiisa Iyo Calankiisa – somalilandtoday.com
Guddoomiye Cabdikariin Xinif Oo Xisbigii KULMIYE Ku Tilmaamay Mid Qof Gaar Ahi Leeyahay Kuna Baaqay In Loo Daayo Astaantiisa Iyo Calankiisa
(SLT-Hargeysa)-Maareeyaha hay’adda qaxootiga iyo barakacayaasha qaranka ahna Guddoomiyaha Guddida qabanqaabada shirweynaha Afraad ee Xisbiga KULMIYE Md. Cabdikariin Axmed Maxamed (Xinif) ayaa shalay hadallo uu warbaahinta ugu talo galay waxa uu ku sheegay in xisbiga KULMIYE go’aansaday in uu ka hor tago tallaabana ka qaado wax uu ugu yeedhay dadka isticmaalka astaamaha iyo Calanka Xisbiga ee haddana dhaliillaha u soo jeedinaya isaga oo si toos ah u sheegay in dadkaasi ay xisbiga u daayaan cidda iska leh sida uu hadalka u dhigay.
Hadalka Guddoomiye Xinif ku sheegay in xisbiga qof gaar ahi leeyahay ayaa waxa ay doodo iyo hadal hayn badan ka dhalisay baraha Bulshada kuwaasi oo aad loogu dhaliilay qaabka uu hadalka u dhigay iyo in uu taageerayaasha xisbiga KULMIYE ee dhaliilaha iyo eedaha u soo jeediya xisbiga ku sheego kuwo aflagaado iyo cay ku haya Madaxweynaha ahna guddoomiyaha xisbiga.
Maareeyaha hay’adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ahna Guddoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha KULMIYE oo toddobaadkan la filayo in uu ka qabsoomo Magaalada Hargeysa ayaa waxa hadalladiisa ka mid ahaa: “Maalmahanba waxa jiray xaflado la qabanayay oo ay dad qabanayeen. Ama dad xisbiga Mucaarid ku ah ha noqdaan ama dad wax kale is tuseen ha noqdaan. Waxa ay isticmaalayeen astaanka iyo Calanka xisbiga. Iyaga oo isticmaalaya oo gidaarrada ku dhejinaya ayay haddana ku dul caayayaan xisbiga laftiisii. Waad arkayseen qaar ay maalin hore ku qornayd Muusoow laba cad isuma heshid. Waad arkayseen mid ay xalay ku qornayd Illayn Good abaal ma leh. Waa ceeb. Qof aad caayayso oo aad la dagaalamayso oo aad dagaal kula jirto in aad astaantiisii iyo calankiisii isticmaashaa aday ceeb kugu tahay. Waana dambi. Waa dambi xisbiga laga galayo waa institution qaran weeyi. Xisbiyadu waa xarumo qaran. Haddii aad isaga tagtay u daa xaqiisa. Haddii aanad daynayn oo aad cayda door bidday adiga oo xor ah cay. Laakiin ha isticmaalin astaanta iyo calanka xisbiga. Waa dambi xisbiga laga galayo. Arrintaana hadda wixii ka dambeeya xisbigu ma aqbalayo una dul qaadan mayo. Cidna xisbiga lagu khasbi maayo. Ciddii maanta af xumo dooratay oo ah dhallinyaradeenii oo aad ogtihiin maanta waxa lagu barbaarinayo oo dhammi in ay tahay cayda iyo af xumada. Waa jiil dhan oo innaga sii baaba’aya. Waa jiil dhan oo dhaqan xun ku soo kordhaya. Waa go’aan xisbiga ka soo baxay oo aan ka soo bixin guddida qabanqaabada ee ka soo baxay” ayuu yidhi Guddoomiye Xinif.